shirkadaha Technology soo horjeeda Partnership Pacific Trans ah - Rule News
shirkadaha Technology soo horjeeda Partnership Pacific Trans ah
INTERNET dagaalama GROUP Cabashada loogu talagalay Mustaqbalka (FFTF) ayaa kor u soo koobay 29 shirkadaha farsamada macluumaadka inuu saxiixo warqad in si xoog leh soo horjeeda maris ah Partnership Pacific Trans ah (TPP) heshiiska ganacsiga caalamiga ah.
TPP waa heshiis in janjeero waxay doonayaan, shirkadaha caalamiga ah oo waaweyn in ka badan wax kasta oo kale. Inkastoo ay guud ahaan waxaa taageera warshadaha qaar ka mid ah iyo dowladda Maraykanka, waxa kale oo uu leeyahay soo horjeeda ay.
29 horjeeda, oo ay ku jiraan DuckDuckGo, Boingboing, Fark, iFixit iyo Reddit siiyey taageero ay ololaha FFTF ka soo horjeeda heshiiskii TPP iyo farxad saxiixay fariinta of mucaaradka.
arrimaha ugu weyn heshiiska ganacsiga soo jeediyey waa soo jeedinta ay maaraysay copyright, gaarka ah iyo shatiyada, oo ay la socdaan xaqiiqda ah in la wada xaajooday in ku dhawaad ​​total qarin.
warqad ka codsanayaa US Senator Ron Wyden ma in ay u ogolaadaan xisbiyada humaagga daalina inaad quortann wax xeerarka internet, oo ka digay in la taageero TPP ka dhanka ah danaha dadweynaha noqon lahaa.
“Waxaan dhisi karaa qaab guul siyaasadda hal-abuurnimo oo kaliya – mid ka mid ah in ay taageertaa fikrado cusub, waxyaabaha, iyo suuqyada – haddii habka aad ku qorshayso waa furan iyo ka qaybqaadashada. Nasiib darro, geedi socodka gorgortanka ganacsiga ayaa wax laakiin hufan. Our warshadaha, iyo dadka isticmaala in aannu u adeegnaa, u baahan tahay in miiska tan iyo bilowgii aad ku qorshayso siyaasado u adeegaan in ka badan danaha ganacsi cidhiidhi ah oo ka mid ah shirkadaha waaweyn yar oo lagu martiqaaday inay ka qayb qaataan,” qoray shirkadaha.
“Waxaan idinka baryayaa ma noqotay version mid ka mid ah Fast Track ama amar horumarinta ganacsiga, ama ansixiyaan hab kasta oo loo fududeeyo lahaa marinka heshiisyada ganacsiga ka kooban qodobada fulinta copyright digital loogu talagalay in Doolaal ah, habka-albaabadu u xiranyihiin.”
Waxay ku dhamaatay warqadda by isagoo sheegay in Senator Wyden, sida kursi oo ka mid ah Guddiga Maaliyadda Senate Mareykanka, waa in meel in ay sii Maraykanka safka hore ee hal-abuurnimo. m
article Tani, shirkadaha Technology soo horjeeda Partnership Pacific Trans ah, waxaa syndicated ka weyddiista oo waxaa halkan fasax posted.
20095	2 Fast Track, iFixit, Ron Wyden, TPP, Partnership Trans Pacific, Iskaashiga Dhaqaalaha Strategic Trans-Pacific, United States, United States Guddiga Senate on Maaliyadda
← Robots qoraal wararka Guinea scrambles inay ku jiraan Ebola ka dillaacay →